ကြားသိရသမျှ – မြန်မာနေ့စဉ်သတင်း
ကြားသိရသူတိုင်း ကြက်သီးထရတဲ့.. ဖမ်းမိတဲ့ ကလေးသူခိုးဂိုဏ်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ၀န်ခံချက်တွေပါ
February 6, 2018 shweyitun	Comment
ကြားသိရသူတိုင်း ကြက်သီးထရတဲ့.. ဖမ်းမိတဲ့ ကလေးသူခိုးဂိုဏ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ ၀န်ခံချက်တွေပါ ဖမ်းမိတဲ့ ကလေးသခိုးဂိုဏ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ ကြက်သီးထစရာ ၀န်ခံချက်တွေပါ..ဖမ်းမိသောကလေးသူခိုး ဖော်ထုတ်ချက်အရ ဓါတုဗေဒစီမံထားသောအရုပ်များနှင့် ခိုးယူကြောင်းသိရသည် ရှမ်းပြည်နယ် ကွတ်ခိုင်မြို့တွင် ဇန္နဝါရီလ(၉)ရက်နေ့ကဖမ်းမိသော ကလေးသူခိုး၅ဦးအနက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ရှမ်းလေး(ခ)အိုက်ပု၏ဝန်ခံချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကျောက်ကပ်ကလီစာ အစားထိုးခွဲစိပ်ကုသသောမှောင်ခိုဆရာဝန်များက Clorocinicalဓာတ်ပါသော ဆေးရည်များ သုတ်လိမ်းထားသည့်ကလေးကစားစရာအရုပ်များကို [...]
ဘွဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို တမူထူးခြားအောင် သဘာဝကျကျ ရိုက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က ဘွဲ့ရကျောင်းသားလေး
ဘွဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို တမူထူးခြားအောင် သဘာဝကျကျ ရိုက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က ဘွဲ့ရကျောင်းသားလေး မြန်မာဆန်လွန်းသော pre convocation 😁 Only in Myanmar 😆 MCB Mr Charming Boys page. [...]
ရှင်လမ်းမရှိ ကားတိုက်ခံရသူ သူနာပြုဆရာမရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း မနေ့ ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ အူဒေါဌာနီ Udon Thani ပြည်နယ် နောင်ဘိုဝါလမ်းပူး ခရိုင် လမ်းဆုံမှာ မီနီပြထားတဲ့အချိန် ရပ်နေတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို နောက်က ကားက အရှိန်နဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ [...]
ကျူရှင်သွားရင်း ခိုးရာလိုက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ ၈ တန်းအရွယ် ကျောင်းသား/သူ ၂ ဦး
ကျူရှင်သွားရင်း ခိုးရာလိုက်ပြေးသွားကြတဲ့ ၈ တန်းအရွယ် ကျောင်းသား/သူ နှစ်ဦးကို ပြန်လည်ခေါ်ယူကာ မင်္ဂလာဆောင်ပေးခဲ့ 5.2.2018 #Moe Kyaw Thu [...]
ထောက်ကြန့် လမ်းဆုံအနီးက ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားနဲ့ ကားသမားတို့ရဲ့ ဖိုက်တင်ခန်းများ
February 5, 2018 shweyitun	Comment
(စရိုက်တွေ ကြောက်စရာဗျာ) ထောက်ကြန့်လမ်းဆုံအနီးတွင် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားနှင့် ကားသမားတို့ ယခုလောလောဆယ် ဖိုက်တင်ပလေးနေ (၅-၂-၂၀၁၈) လှည်းကူးငါးပိချက် [...]
သတို့ သမီးကိုသိန်း ၁၀၀ လယ်၁၀ဧက နဲ့တင်တောင်းတဲ့ သတို့ သား
သတို့ သမီးကိုသိန်း ၁၀၀ လယ်၁၀ဧက နဲ့တင်တောင်းတဲ့ သတို့ သား [...]
အသတ်ခံရတဲ့ အတိတ်ဘ၀ကို ပြန်ပြောပြခဲ့တဲ့ ၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
အသတ်ခံရတဲ့ အတိတ်ဘ၀ကို ပြန်ပြောပြခဲ့တဲ့ ၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေး ဂျာမန် စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် Trutz Hardo ရဲ့ “Children Who Have Lived Before Reincarnation Today” ဆိုတဲ့သူ့စာအုပ်မှာ သူတို့ရဲ့အတိတ်ဘ၀တွေကို မှတ်မိနေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အကောင့်တစ်ခုက တိကျမှန်ကန်တဲ့ [...]
မီးခိုးဖြစ်သွားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲနဲ့ မာယွန်မီးတောင်ရဲ့ နောက်ကွယ်က အချစ်ရာဇဝင်
February 4, 2018 shweyitun	Comment
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မှာတည်ရှိတဲ့ မာယွန်မီးတောင်ဟာ အမြင့်ပေ (၈)ထောင်ကျော် မြင့်မားပြီး လက်တလောမှာလည်း မီးတောင်ပြွန်ဝကနေ မီးခိုနဲ့ ပြာတွေမှုတ်ထုတ်နေဆဲဖြစ်လို့ SOS Alert ထုတ်ပြန်ထားရဆဲပါဘဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့လ ဇန်နဝါရီ(၁၈)ရက်နေ့ အစောပိုင်းက မာယွန်မီးတောင်မှ မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ မီးခိုးတွေဟာ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာကို ဓာတ်ပုံဆရာ Bro. [...]
ဆယ်တန်း၆ဘာသာဂုဏ်ထူးရပြီး မိဘကိုကူညီရမှန်းမသိလို့ ကျွန်မရဲ့ taxi driver လေးက ဘာလုပ်ရမလဲ မေးဖူးတယ်
January 31, 2018 shweyitun	Comment
ဆယ်တန်း၆ဘာသာဂုဏ်ထူးရပြီး မိဘကိုကူညီရမှန်းမသိလို့ ကျွန်မရဲ့ taxi driver လေးက ဘာလုပ်ရမလဲ မေးဖူးတယ် ဆယ်တန်း၆ဘာသာဂုဏ်ထူးရပြီး မိဘကိုကူညီရမှန်းမသိလို့ ကျွန်မရဲ့ taxi driver လေးက ဘာလုပ်ရမလဲ မေးဖူးတယ်.. စာရရင်တော်ပြီဆိုပြီး အတွင်းခံကအစ လျှော်ပေးခဲ့တာ ခုတော့ ပြင်မရတော့ဘူး.. ဒါ့ကြောင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက [...]
ခင်ပွန်းနဲ့ စကားများပြီး ကိုယ်တိုင် အဆိပ်သောက်ကာ ခလေးတွေကို ပါ အဆိပ်ခတ် သတ်ခဲ့တဲ့ အမေ
January 31, 2018 January 31, 2018 shweyitun	Comment
ခင်ပွန်းနဲ့ စကားများပြီး ကိုယ်တိုင် အဆိပ်သောက်ကာ ခလေးတွေကို ပါ အဆိပ်ခတ် သတ်ခဲ့တဲ့ အမေ [...]